ခွင & မူပိုင် | CAUSE
ကြှနျုပျတို့၏ website မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သငျသညျ browse အသုံးပြုသင်တို့နှင့်အတူအလိုက်နာရန်သဘောတူကြသည်ကိုဤ website နှင့်အောက်ပါမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်လိမ့်အတူတကွအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူဆက်လက်ပါ။
ဤဆိုဒ်တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များသည်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏ကထောက်ပံ့နေသည် stopsafeschools.com။ ကျနော်တို့ရက်စွဲအထိနှင့်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များစောင့်ရှောက်ဖို့ကွိုးစားကွ, ငါတို့မဆိုကြင်နာမရှိကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံဖြစ်စေလျက်, က်ဘ်ဆိုက်ပါသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူပြည့်စုံ, တိကျမှန်ကန်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး, အမြန်သို့မဟုတ်ဆိုလို, ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနေစဉ် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် website တွင်ပါရှိသော, ဒါမှမဟုတ် related ဂရပ်ဖစ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်အပေါ်နေရာမဆိုမှီခိုအားထားသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာတင်းကြပ်စွာထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောမှန်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျနော်တို့န့်အသတ်, သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ဒေတာသို့မဟုတ်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောအကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးမှုမှပေါ်ပေါက်သမျှမဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲအပါအဝင်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်, ဒါမှမဟုတ်နှင့် ဆက်စပ်. , ဒီ website ၏အသုံးပြုမှုကိုဖွစျလိမျ့မညျ ။
ဤဆိုဒ်အားဖြင့်သင်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မဟုတ်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လင့်ထားသည်နိုင်မည်အကြောင်း stopsafeschools.com။ ကျနော်တို့သူတို့အားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သဘောသဘာဝ, အကြောင်းအရာနှင့်ရရှိနိုင်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ရှိသည်။ မည်သည့်လင့်ခ်၏ပါဝင်မှုသေချာပေါက်တစ်ဦးထောက်ခံချက်ဆိုလိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်များထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုတက်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေ website ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး stopsafeschools.com မတာဝန်ယူနှင့်အဘို့အခံထိုက်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများမှယာယီမရနိုင်ပါဖြစ်ခြင်း။
ဒီ website နှင့်၎င်း၏ contents တွေကိုများ၏မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် CAUSE (မလုံခြုံလိင်ပညာပေးဆန့်ကျင်ညွန့်ပေါင်း) - © 2018 ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံအတွက် contents တွေကိုအားလုံး၏မဆိုပြန်လည်ခွဲဝေမှုသို့မဟုတ်မျိုးပွားအောက်ပါအချက်များကိုထက်အခြားတားမြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဒေသခံတစ်ဦး hard disk ကိုသာဖို့ contents တွေကို print ထုတ်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်သာတစ်ဦးချင်းတတိယပါတီများမှအချို့ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ copy ခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကပစ္စည်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသိအမှတ်ပြုမှသာလျှင်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မှလွဲ. ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အကြောင်းအရာ exploit, မပြုစေခြင်းငှါ။ သင်ကထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်၏အခြားအပုံစံပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆိုက်ပေါ်ရှိဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောစာရင်းအင်းစက်အခြေခံသည့်ဘာသာပြန်ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဘာသာပြန်၏မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို Informa၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်များနှင့်လိုင်စင်ရသူများသည်မည်သည့်တိကျမှန်ကန်မှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အခြားတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကြောင့်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ သို့မဟုတ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့အတွက် Informa သည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အကျုံးဝင်သည်။